(Daawo Video) Ciidankii ugu horreeyay oo ka soo baxay furimaha dagaalka iyo kuwa kale oo la filayo - Muqdisho Online
Home Wararka (Daawo Video) Ciidankii ugu horreeyay oo ka soo baxay furimaha dagaalka iyo...
(Daawo Video) Ciidankii ugu horreeyay oo ka soo baxay furimaha dagaalka iyo kuwa kale oo la filayo
Sida warsidaha MOL uu horey idiinku sheegay, waxaa maalmaha soo socda ka soo bixi doona ciidamada XDS oo ku jira furimaha hore ee dagaalka mushaar la’aan iyo raashin la’aan la soo deristay ciidanka difaaca kaga jira furimaha hore ee dagaalka.
Ciidanka XDS ayaanan helin xuquuqdoodii mushaarka iyo raashinka afartii bilood ee ugu danbeysay iyagoo wasaaradda gaashandhigga iyo taliska CXDS aay ku sheegeen in aay socot diiwaan gelinta ciidanka si aay u helaan xuquuqdooda bil walba.
MOL oo xiriir la sameeysay saraakiil ka tirsan wasaaradda Maaliyadda ayaa loo xaqiijiyay in ciidanka horey loo diiwaan geliyay oo la hayo macluumaadkooda iyo koontada lacagta loogu shubo, isla markaana aay ku sheegeen been aan raad lahayn warka ka soo yeeray Wasaaradda Gaashaandhigga.
Saraakiisha Wasaaradda Maaliyadda ayaa sidoo kale MOL u xaqiijay in aay maran tahay koontada dowladda ee Bangiga Dhexe, ilaa iyo haddana aan la ogeyn goorta la helayo lacag lagu bixiyo mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dowladda.
Musuqmaasuqa xukuumadda RW Kheyre ayaa noqday kii ugu xumaa abid kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waana markii ugu horreeysay oo dhammaan shaqaalaha iyo ciidanka aanay heliin xuquuqdoodii taasoo sababtay guud ahaan dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha gobolada dalka.
Waxaa maanta Gobolka Shabeellaha Hoose isaga soo baxay Ciidanka Xoogga dalka ee qeybta 12-ka April. Ciidamada ayaa waxaa la sheegay in ay isaga baxeen deegaanka Dhanaane gaar ahaan wadada xeebta ee isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo Marka, halkaas oo in muddo ah ay ku lahaayeen Fariisimo waaweyn.
Ciidamo katirsan Xooga Dalka oo Mushaar la'aan uga soo baxay Furimaha Dagaalka ee Gobolka Sh/hoose,Maxaasa ka jira in Alshabaab ay dib ula Wareegeyn Deegaanada Qaar?
Ciidamo ka tirsan Xooga Dalka oo Mushaar la'aan uga soo baxay Furimaha Dagaalka ee Gobolka Sh/hoose,Maxaasa ka jira in Alshabaab ay dib ula Wareegeyn Deegaanada Qaar?
Dalsan TV यांनी वर पोस्ट केले रविवार, १७ मार्च, २०१९
Previous articleAl Shabaab oo daqliga ka soo galo Magaalada Muqadishu labalaabmay. Sabab?
Next articleShirkii Xildhibaanada Beelaha Habargedir ee Muqadishu maxaa ka soo baxay?